OMN: GRD – Haala Yeroo (LIVE) Gur 25, 2018
OMN: GRD – Haala Yeroo (LIVE) Gur 25, 2018 ﻿
Silaa Naqamtee galu dadhabne maalifi 4kiilofi Boonya!
Silaa Naqamtee galu dadhabne maalifi 4kiilofi Boonya! ﻿
Kun Naqamtee – Dhaloota garaan fincile sossobbaan hin dhaabu.
Kun Naqamtee galgala kalessaa kanadha. Dhaloota garaan fincile sossobbaan hin dhaabu. Via: Lammii Beenyaa Agaaziin akkasiin ijoollee Naqamtee reebaa oolte. Qeerroon Naqamtee hooggantoota KFO hundumaa nagaan mana mana isaaniin gahanii jiru. Ulfaadhaa jennaan Naqamtee eda [Read More]
Ethiopia: House should repeal martial law and pave way for reforms Written by Bona Geshe (opride) — On Feb. 16, a day after Prime Minister Hailemariam Desalegn abruptly resigned, Ethiopia’s Council of Ministers declared a [Read More]
UN welcomes Ethiopia PM’s resignation
UN welcomes Ethiopia PM’s resignation The UN said it welcomed the recent decision of Ethiopia’s Prime Minister, Hailemariam Desalegn, to resign, amidst steps toward governance reforms and increased political participation in the country. UN Secretary-General [Read More]
The US “Stands by” by its Statement Condemning Ethiopia’s State of Emergency Addis Abeba, February 25, 2018 (Addis Standard) – The US embassy in Addis Abeba said the US “stands by its statement” strongly disagreeing with [Read More]
Magaala Naqamtee irratti Wal dhabdee guuddan qeerroo fi huumna agaazi waliin cimee jira . ﻿ ONN:Wal-hubannaa ABO fi TPLF jidduu ture laalchisee marii bal’aa itti G/Damee Dantaa Alaa ABO kan ture Obbo Taahaa Abdii waliin [Read More]
Haasaa obbo Baqqalaa Garbaa magaalaa Baakkootti har’a taasise ﻿ ONN:SHAMMARAN KORA SABAATTI GAAFI FI DEEBII GODHAN Jilli hooggantoota KFO Dr #Mararaa Guddinaa fi obbo #Baqqalaa Garbaatiin durfaman kan magaalaa Naqamtee seenaanii uummataan wal arguu dhorkaman, [Read More]
አቶ ኤርምያስ ስለ ጠቅላይ ሚኒስቴር ምን ይላሉ? እስኪ አብረን እንስማው ኪኪኪኪኪኪኪ Haala tartiiba obbo Ermiyaas namoota filate kana tti, anis itti gaafatamaa dhimma “Media” obbo Mahdi Idris taasisee filadheera. Namoonni mormitan yoo jiraattan sagalee dhageessisaa ከምሽቱ ሦስት [Read More]